‘भीआईपी’ अभियुक्तहरुलाई दलीय संरक्षण छैन ! - Purbeli News
Trending # मृत्यु102# पक्राउ77# राशिफल59# मृत्यु48# नेकपा31# न्युरो अस्पताल29# पक्राउ29# दुर्घटना26
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक ०२, २०७६ समय: ७:२१:१७
काठमाडौँ । १२ वर्ष पुरानो फौजदारी अभियोगमा सांसद अफताव आलम पक्राउ परेपछि कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरे। १२ घण्टा पनि नबित्दै कांग्रेस नेतृत्वले आन्दोलन नगर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दियो।
महराबाट यौन दुर्व्यवहार : संसद्की महिला कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि यौन दुर्व्यवहार आरोपमा तत्कालीन सभामुख महरा हिरासतमा छन्। यस्तो आरोपमा आरोपमा पद गुमाउने भीआईपीमा महरा पहिलो हुन्। शाहीले बयान फेर्दै गरे पनि प्रहरीले महरालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। सांसद पद नछोडे पनि त्यसबापतको सेवासुविधा निलम्वन छ। फौजदारी अभियोग प्रमाणित भए महराको पद स्वतः खारेज हुनेछ।
घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाएर हत्या १ : कांग्रेस सांसद अफताब आलम १२ वर्ष पुरानो फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। बम विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै इँट्टाभट्टामा हालेर मारेको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।
विमानस्थल तोडफोड : जनकपुर विमानस्थल तोडफोड गर्ने राजपा सांसद प्रमोदकुमार साह पक्राउ परे। विमान आउन ढिला भएको आक्रोशमा संवेदनशील स्थानमा तोडफोड गरेको आरोपमा पक्राउ परेका साह अदालतको आदेशमा तारेखमा छुटेका छन्। विगतमा ‘सामान्य’ मानिने घटनामा सांसद नै पक्राउ पर्नुले जनतामा कानुनी शासनको अनूभूत हुन थालेको छ।
कुटपिटमा पक्राउ पुर्जी : कुटपिट र फौजदारी अभियोगमा अदालतको म्याद बुझ्न ३५ दिने पुर्जी नेकपा सांसद पार्वत गुरुङविरुद्ध जारी भएको छ। तत्कालीन माओवादीका नेतालाई गुरुङको निर्देशनमा कुटपिट गरिएको भन्ने मुद्दा उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा परेको छ।
लोगो लाउने, सुविधा नपाउने : जेलमै रहेका बेला संसद् सचिवालयले सांसदको लोगो दिए पनि राजपा सांसद रेशम चौधरीले सांसदको सेवासुविधा पाएका छैनन्। टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भन्दै जिल्ला अदालत कैलालीले सांसद चौधरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। चौधरी जेलमा छन्। उनले सांसदको भूमिका खेल्न नपाउँदा त्यस क्षेत्रका जनताले जनप्रतिनिधिको अनभूति गर्न पाएका छैनन्।
रातो पासपोर्ट : जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न जनताले संविधान बनाउन पठाए ६ सय १ जनालाई। तर, पहिलो संविधानसभामै दुखद् घटना भयो। सांसदहरूले बेचे सुविधाको पासपोर्ट। सांसदद्वय गायत्री साह र बीपी यादव जेल परे।
सांसद नारदमुनि रानाविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। त्यति बेला ९विदेशको लोभ०मा स्पेनको कार्यक्रम जाने भन्दै रातो पासपोर्ट बेचिनबाट जोगिए, केही सांसद।
जेलमै रहँदा सकियो पदावधि : जनकपुर बमकाण्डमा पक्राउ परेका सांसद सञ्जय साहले जेलभित्रै दोस्रो संविधानसभाको कार्यकाल पूरा गरे। जिल्ला अदालतले बमकाण्डमा दोषी ठहर गरेपछि साह जेलमा छन्। अाजकाे अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग ! अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ
एफएम बन्द गराउन सक्ने गाउँपालिकाको कार्यविधि
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवादले १४ वर्षअघि राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाएको खुलासा